कांग्रेस सभापति देउवानिवासमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरू । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
२०७८ बैशाख २३ बिहीबार ०६:०९:००
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकलाई चाँडो निर्वाचनमा लैजान र त्यसका लागि सहकार्य गर्न कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार पार्टी नेतासहित बुढानीलकण्ठ पुगेर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै सत्तासाझेदारीसहित चाँडो चुनावको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
तर, जवाफमा कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसले विश्वास मतमा असफल बनाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । ‘हामीले संविधान एक भएरै बनाएका हौँ, तर तपाईं संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुभएन, बरु त्यही संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नुभयो । सत्ताका विषयमा तपाईंसँग सहकार्य हुँदैन । विश्वासको मतमा तपाईंलाई असफल बनाउने निर्णय गरिसकेका छौँ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै वार्तामा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘अहिलेको कोरोना संकटको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तपाईं डटेर लाग्नुस्, जनताको जिउधन बचाउनुपर्नेछ, यसमा कांग्रेसले सहकार्य र सहयोग गर्छ ।’
जवाफमा देउवा छोटो बोलेपछि कांग्रेस नेताहरूले बोलेका थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीका गतिविधिको आलोचना गरे । ‘तपाईं संविधानको भावनाअनुसार चल्न सक्नुभएन । संविधान, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिलाफमा काम गरिरहनुभएको छ । संविधान नमान्ने, सर्वोच्च अदालतलाई नमान्ने, संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई भत्काउने काम गर्नुभयो । अब हामीले तपाईंलाई के आधारमा विश्वास गर्ने ?’ छलफलमा पौडेलको ओलीलाई प्रश्न थियो ।
बैठकपछि नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले ओलीले चाँडै चुनाव गरौँ भन्ने विषयलाई आधार बनाएर सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री दलबलसहित भोट माग्न आएँ भन्दै आउनुभयो, उहाँले नै धेरै बोल्नुभयो । तर, उहाँको अनुहारमा विश्वासको मत पाउँछु भन्ने कुनै आत्मविश्वास थिएन,’ नेता पौडेलले भने, ‘ओलीजीले सहकार्य गरौँ, मिलेर चुनावमा जाऔँ, चाँडै चुनाव गरौँ । तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो, बरु त्यो म पूरा गर्छु भन्नुभयो, हामीले अस्वीकार गर्‍यौँ ।’
तर, कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भेटमा औपचारिक कुराकानी मात्रै भएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीजीले मैले विश्वासको मत लिँदै छु, मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भन्नुभयो । तर, हामीले कांग्रेस विपक्षी पार्टी हो, अहिले सहयोग गर्ने अवस्था छैन भनेर स्पष्ट राख्यौँ,’ डा. महतले भने, ‘तपाईंको बोली र व्यवहार भिन्न–भिन्न छन् । तपाईं लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने गलत बाटोमा लाग्नुभएको छ । अब यसलाई रोक्नुहोस् भन्यौँ ।’ ओलीले भेट मागेको भन्दै देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए । सामूहिक भेट्ने भनेपछि ओली पनि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित कांग्रेस नेतासँग छलफल गर्न बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत सहभागी थिए । साढे ४ बजेबाट सुरु भएको छलफल करिब दुई घन्टासम्म चलेको थियो । प्रधानमन्त्री आउने भनेपछि देउवानिवासमा कांग्रेस नेताहरू अगावै जम्मा भएर बसेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा संसद्मा अंकगणितको सुनिश्चितता खोजेका कांग्रेस सभापति देउवा अहिले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने विषयमा भने सकारात्मक देखिएका छन् । उनीनिकट एक नेताका अनुसार चाँडो चुनाव गर्ने ओलीको आश्वासनमा पर्दा व्यवस्थामाथि नै खतरा आउन सक्ने र ओलीकै पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिका कारण पनि देउवा ओलीसँग विश्वस्त छैनन् । अहिले देउवालाई पार्टीभित्र पनि ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने भन्दै वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न दबाब छ । मंगलबारको शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि देउवाले वैकल्पिक सरकार गठनका विषयमा छलफल अघि बढाउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।